Glass fibre kwagcizelela resin ophahleni ishidi RY720-B - China Hubei Shengyu zokwakha
Fob Inani: 5.65-9.99 / square metres
Shengyu zokwenziwa resin ophahleni ishidi, kwagcwala Geloy ASA resin, kuyinto ekhethekile 3-ungqimba co-extruded ophahleni ishidi. ophahleni Traditional Tiles iphethini ngemibala ocebile setshe ukukhanya ukuthi kulula ukufaka. Kuyinto setshe eziqinile kakhulu, amelana umoya nesichotho, angasetshenziswa lapho isici okusezingeni eliphezulu esthetic liyadingeka. Yini ngaphezulu, luhlala esitebeleni umbala Izakhiwo ngaphansi ultra-violet ngemisebe, dampness, ukushisa, chillness kanye nomthelela.
3.0 ± 0.1mm 720mm 640mm 660mm njengoba kudingeka (lifike kunamba ka 219) 6kg ± 0.1kg Matte noma bonobuhle Blue, bomvu Gray, Deep Red, ubumba
Njengoba phezulu impahla ungqimba, Geloy ubunjiniyela resin eyenziwe GE kuyinto engavamile ezifanele ukusetshenziswa ongaphandle. Ngisho wadalula ultra-violet ngemisebe, dampness, ukushisa, chillness kanye nomthelela, imikhiqizo ahlale ukuzinza umbala izakhiwo ngokomzimba. Ukuhlolwa owawuse-Aging Test maphakathi Arizona futhi Florida ukufakazela ukuthi lingaphansi kuka △ E 5 ingakapheli iminyaka 10.
Shengyu zokwenziwa resin ophahleni ishidi has umthamo enamandla eziveza esindayo. Ukuhlolwa, olwenziwa Shanghai kaMasipala Isakhiwo Material Uphiko Quality Ukugada kanye Test Station, kufakazela ukuthi akukho ufa in nesimo 660mm asekelayo span nomthwalo 150kg isicelo.
One piece esezingeni 720mm ophahleni ishidi ukala 5.9 ± 0.1kg.
Okulandelayo: temperatuer High & ukugqwala ukumelana ophahleni ishidi
Phakathi yokusingatha, imikhiqizo kumele lingadilizelwa ukugwema lokhu zikwenza ngokonakalisa noma ukunwaya ebusweni umkhiqizo. Ukuze ishidi olulodwa isikhathi eside kunaleso 8M, amaphuzu anele ukusekela kubalulekile ukugwema kwemifantu Tile.
Sicela bahlanganise iraba indandatho waterproof ku gasket phambi ukulungisa nezikulufi roof.The akumele abethela kakhulu tightly.Finally push ikhava waterproof ungene ngezikulufo uvalwe.
nezikulufi kumele lulungiswe zibheka lo surface.Screws ishidi ubude 75mmand ububanzi 6.3mm kudingeka ukulungisa Tile main.
Shengyu resin ishidi ziyasetshenziswa ophahleni kuzilandeleli kusuka 20 kuya 80.For iphimbo ngale leli banga, izinyathelo ezikhethekile kumele kuthathwe phakathi nokufaka.
1. Hlobisa isakhiwo
The Surface emphemeni kufanele ibe bushelelezi, indaba ka emphemeni kufanele ube ukusonteka encane, emphemeni kufanele bube ngaphezu kuka-12mm ewugqinsi (ngokuvumelana span purlin).
A igebe 3-5mm phakathi onezitezi ezimbili kubalulekile ukusonteka.
Imiqulu angangenwa manzi kumele avule kahle bese zibheka nge ukweqelana olunembile.
2. Steel isakhiwo
I-engeli ensimbi isakhiwo kumele ngokunembile elawulwa phakathi kwenqubo, okuzokwenza nomthelela iphimbo ophahla. Ukusuka ka-engeli kuzokwenza i ophahleni engalingani.
Ali The lezinsimbi kufanele kube anti-ukugqwala ngayo.
3. kwagcizelela isakhiwo ukhonkolo
I underlay ngokhonkolo azinalo ithonya kubalulekile kwi evenness ophahleni, kuyilapho ifaka ashumekiwe purlins kumelwe sicoceke kakhulu futhi indiza.
Bobabili ifaka steel nezinkuni ashumekiwe purlins kufanele kube anti-ukugqwala iphathwa ukunweba ukuphila kophahla isakhiwo.
Steel purlins kufanele ashiselwe kuya steel esishunyekiwe ifaka nezinkuni purlins kungenziwa abethelwe izinkuni esishunyekiwe ifaka ngqo.
Ukunakwa! Ayikho Tile ophahleni ongaxazulula ngokuphelele inkinga ka ungangenisi amanzi ngokwalo, ngoba izindlu evamile, okufanele kube khona underne
1. Anti-ukugqwala ukwelashwa: Metal purlins kufanele camera nomunye ungqimba anti-ukugqwala upende ezimbili zamatshe ezinengilazi kokuphothula. Izinkuni purlins kufanele camera nge anti-ukugqwala noma uwoyela asphalt.
2. purlin phezulu kufanele abe 180mm ibanga ukusuka umugqa yokhalo ukuze ufake tile yokhalo.
3. purlin phansi kufanele abe ibanga 50-70mm kusukela eave.
4. Isikhala purlin kuyinto 660mm ngoba Royal isichuse.
Ukuthuthukiswa Heat Ukunwetshwa
Shengyu resin ophahleni ishidi has a Coefficient ukunwetshwa komugqa 0.0000493 / ℃ .Ukuze ukuvumela evamile komugqa ukunwetshwa ishidi, thina ukweluleka bayamba umgodi ubukhulu 2-3mm ezinkulu kunalokho isikulufo, bese wenza kokungathembeki ukuze gwema noma yimiphi dilatation we sheet.Please musa ukwenza kokungathembeki kakhulu uvalwe.
Ukufakwa Of isichuse Main
ukuqondanisa Lungile kubaluleke kakhulu kungakhathaliseki ukuthi hlobo luni ophahleni isakhiwo, kuphela lokhu kungaba amashidi uhlanganiswe eduze futhi uqondise Umugqa mpo kufanele kube 50 ~ 70mm ukuba emaqaqasini sidewall ngoba uphahla ezinophahla olungunxantathu, futhi umugqa ovundlile 150mm kuya purlin phansi .
Beka iphepha lokuqala eduze ngangokunokwenzeka lo mpo ukwakhiwa umugqa, ulungise ungene Tile lokuqala umugqa mpo yesibili, ngokuvumelana asekelayo framework.The umugqa wokuqala kumele ngaphansi kwezimo kube perforated.
Fixings kufanele Mhlangano Crest wave Tile.
ukunakekelwa ngokukhethekile kudingeka zithathwe uma bakubheka umugqa wokuqala ngenxa ku amashidi eside ngisho ulwelwesi off a kwangu ambalwa ukuze ishidi ngamunye kungadala izinkinga.
Bese uya ku-ukwenza kokungathembeki yesibili, abaphila ishidi yesibili singatsheki ungene kuqala futhi silungise nokuzinyeza ngezikulufo ku Tile wokuqala aphansi okuhambelana ukugqagqana.
Ukuze ugcine ukuqondanisa efanele fixings sincoma ukusetshenziswa umugqa yenkomba eqondiswa okwedlulele umshayo.
Qhubeka ngendlela efanayo ne amashidi lwesithathu naphambili, futhi uphinde uhlole isimo amashidi ezine ke silungise zonke izinhlangothi Tile.
Hlanganani amashidi ngendlela efanayo kuze Esokugcina, uma kunesidingo, ububanzi ishidi lokugcina kungase kudingeke uthathe ngokufanele.
Ukunakwa! Njalo ishidi kufanele uhlanganiswe eduze ngangokunokwenzeka kulowo baprofetha ngasikhathi sinye.
Ukuze lomzila wesibili sincoma njalo ukuthi uqala ukusuka kwesokunxele ishidi ukuthi ahlukaniswe lengthways isigamu (ayibe nezinhla ezintathu tile) .Le ikuvumela ukuba uqhubeke ukugqagqana ovundlile lemigqa uvalo, futhi ngenxa yalokho yini ugweme crossover amashidi amane ukugqagqana.
I amashidi asele usike ekuqaleni kungukuthi okulahlwayo njengoba ingasetshenziswa ekupheleni le ukufulela njengoba izinguquko.
Qedela uhlangothi ngendlela efanayo.
Iyahambelana imigqa mpo tile ngakolunye uhlangothi nalabo wokuqala, ukuze babuthane Tile yokhalo.
Ukunakwa! Ukuze emthambekeni aphansi noma esishintshashintshayo ezinomoya ikakhulukazi noma rainly kuyafaneleka unamathelise ukugqagqana ngu resin sealant noma Silicon sealant.
Ukuze unxantathu uhlangothi kophahla ezine yokuma kwayo indawo, iphepha lokuqala kufanele uqale kusukela maphakathi, bese uqhubeka kokubili izinkomba kwesokudla noma kwesokunxele.
Sika amashidi agudle hip ukuze asesemble yokhalo idayagonali
Ukufakwa yokhalo Tile kumele kuqale komunye side.For Tile kuqala, kufanele isigamu usike ukugwema crossover amashidi amane ukugqagqana.
Self-ngezikulufo nge ubude 75mm futhi ububanzi 6.3mm kuyodingeka ukulungisa Tile yokhalo ezandleni tile.Take main ukuba silungise yokhalo eduze emaphethelweni futhi ngenxa yalokho zingenalo uba nezinkinga kokuziphatha.
Njengoba ukufakwa yokhalo idayagonali, kufanele tihambisane ukugcina iqonde nge hip line.Self-ngezikulufo nge ubude 75mm futhi ububanzi 6.3mm kudingeka ukulungisa emaphethelweni prefabricated main tile.Diagonal yokhalo Tile kumele afakwe kusukela phansi kuya phezulu nge ukugqagqana of 50mm.
Ezintathu ngendlela uxhumano isetshenziswa njengoba element ngokujoyina phakathi yokhalo lwento kanye eyodwa idayagonali ngoba uphahla ezine egqumeni.
I Comer wadala ngokujoyina kuzilandeleli ezimbili bebuthanela ubizwa ngokuthi valley.Position futhi silungise emapheshana ezimbili ezihambisanayo, 240 mm ukusuka maphakathi Comer, zifana kuya Comer kwesigodi.
Lungisa kudoti esigodini eyenziwe zokwenziwa resin iphaneli noma metal emapheshana usebenzisa self-ngezikulufo noma izipikili.
Lashukumisa esigodini roll angasetshenziswa ngoba isigodi gutter.Position ke ekhoneni kusukela umugqa bulala, ukubeka phansi ngokucophelela slab.Begin ukulungisa emaphethelweni okwedlulele esigodini phezu emapheshana usebenzisa self-ngezikulufo noma izipikili.
I amashidi elihambisana emgqeni esigodini kumele pre emise phambi ukuma, kodwa kokushiya kungenzeka ukuthi uhlanganyele nabo futhi, ngemva kokulilungisa, ukuba abe ngqo kahle esigodini umugqa.
Uxhumano Nge Wall
Sebenzisa sidewall esibonisa eyenziwe Shengyu resin iphaneli noma lwensimbi, unamathele ibhodi agqoke odongeni namathayili by self-ngezikulufo noma izipikili futhi uyivale ukuphela ephakeme ka agqoke ne-silicon sealant.
Uxhumano Nge chimneys
Sebenzisa resin zokwenziwa noma insimbi flashings, unamathele ibhodi Siyafulesha odongeni namathayili by self-ngezikulufo noma izipikili futhi uyivale ukuphela ephakeme ka agqoke ne-silicon sealant. (Bheka imidwebo ngenhla)
Flashings Kunconywa ukucubungulwa ngalesi kusayithi ibhodi metal, njengoba kuzilandeleli ophahleni nesikhundla noshimula ziyahlukahluka ngoba uphahla ezahlukene.
Aluminium noma lashukumisa imiqulu angasetshenziswa ngoba ukuhlobana kwemikhosi tile chimney.Stick imiqulu ukuze amashidi zonke emhlabeni chimney.Fix kube komunye umkhawulo imiqulu ukuze kushimula by izipikili bese seal ukuphela ephakeme.
Uxhumano Nge Skylight
I amashidi kumele uhlanganiswe ngendlela evamile kuze ukusondelana skylight.
Thatha izilinganiso esiqondile skylight, wenze slot ngqo ishidi polisher nezimo noma ephathekayo mncane-izinyo akubona.
Abaphila lomnyango owayephambili uxhumano aphansi eshidini tiled futhi balolonge ngezandla zakho silingane ishidi kahle.
Khona-ke, ukubeka ishidi eliyindilinga, fitting kahle kuze kube sohlangothini nokuxhumana engenhla futhi ukugqagqana ngokwengxenye, nge emkhawulweni izakhi bakhiphe elezinga eliphansi le lomnyango phambili ohlangothini engezansi skylight.
Emva kokuphothula ukuhlangana yokhalo idayagonali, ufaka esibulalayo idayagonali yokhalo ucezu ku ukuphela phansi yokhalo idayagonali, futhi silungise kuya bulala idayagonali by izipikili.
Lwalugobile Roof isichuse
Lwalugobile zophahla Ishidi
Fibre lukathayela Ishidi Roof
Fibre Ishidi Ukuze uye ophahleni
Fiberglass zophahla Izinto
Fiberglass Skylight AmaSpredishithi
Fire cishe yizona ezisetshenziswa kabanzi Plastic Roof Ishidi
Green fiberglass zophahla
Long span zophahla Ishidi
Modern Classical zophahla isichuse
Multi Color PVC Roof Ishidi
Plain Uhlobo Bamboo Roof AmaSpredishithi
Plastic Garage Roof AmaSpredishithi
Plastic PVC zophahla Ishidi Ukuze elachitheka
Plastic Roof Ishidi
Plastic Roof isichuse
Purple Roof isichuse
PVC Material zokwakha Roof Tiles
PVC Plastic Roof Ishidi
PVC Plastic Roof isichuse
PVC Roof Ishidi iphrofayela
PVC zophahla Ishidi
PVC zophahla isichuse
Imvula Ukuvikelwa zophahla Ishidi
Roof AmaSpredishithi Inani Per Ishidi
Zophahla Amashingili AmaSpredishithi
okungabonakali zophahla Ishidi
trapezoid isitayela Roof isichuse
Wave zophahla Amashingili AmaSpredishithi
White fiberglass AmaSpredishithi
Workshop Roof isichuse